mardi, 14 janvier 2020 22:22
SECES, Sampana Antananarivo: Miantso ny filohan’ny Repoblika hamaha ny olana
Miantso ny filohan’ny Repoblika hamaha ny olana sy hametraka ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tSiansa amin’ny toerana sahaza azy, ary koa hanolo tsy misy hatak’andro an’ireo olom-boatendry manana andraikitra ambony izay tsy mahatanteraka ny andraikitra nankinina taminy.
« Raha mitohy ny tsy famahana an’izao olana izao dia hiteraka olana tsy ho an’ny Oniversite manerana ny nosy ihany fa ho an’ny firenena manontolo » hoy ny fanambarana nataon’ny SECES, Sampana Antananarivo.
Mahajanga: Hotanterahina rahampitso ny famindram-pahefana eo anivon’ny Kaominina
Hatao ny alarobia 15 janoary 2020 ny famindram-pahefana eo amin’ny Ben’ny tanàna mpisolotoerana Ravelomanantsoa Emilson sy ny Ben’ny tanàna voafidy ofisialy Andriantomanga Mokhtar Salim.
Ben’ny tanàna teo aloha, nahavita taom-piasana iray ity farany no voafidy fanindroany hitondra ny tanànan’i Mahajanga.
mardi, 14 janvier 2020 21:19
Trafika taolam-paty: Jiolahy 3 nitondra taolam-paty 5 sakaosy tra-tehaka tao Ambositra
Sarona teo amin’ny sakana nataon’ny Zandary teo Andalamahitsy Ambositra II, amin’ny lalam-pirenena faha-7 ny folakandron'ny 12 janoary 2020 ny fiara mazda miloko mena sy fotsy avy any Fandriana nandehanan’ireo jiolahy telo nitondra taolam-paty lava miisa 188, natao tao anaty sakaosy miisa dimy, rehefa nahazo angom-baovao avy amin'ny olona tsara sitra-po ny Tobi-paritry ny Zandarimariam-pirenena Ambositra.
Nosamborina avy hatrany ireo lehilahy miisa telo nitondra izany, izay samy avy any Fandriana, ary niaiky fa mpisera taolam-paty, ary nogiazana ambalam-pamonjàna ihany koa ilay fiara.
mardi, 14 janvier 2020 21:10
Antenimierandoholona: Nanatitra fitoriana teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC)
Nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, androany talata 14 janoary 2020 ; fitoriana izay milaza fa misy ny tsy fahatomombanana hita taratra tamin’ny fanatanterahana ilay fanapahan-kevitra laharana 005-HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, izay noraisin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, mikasika ireo didy hitsivolana izay nosoniavin’ny Filoham-pirenena nandritra ny fotoana nanomezana azy fahefana hanao lalàna tamin’ny taona 2019, tamin’ny fotoana tsy nampisy ny Antenimierampirenena.
Fenoarivo- Ambatofinandrahana: Basy miisa telo sy bala telo saron’ny Tafika
Nahatratra basy miisa telo, vita gasy ny roa sy « mousqueton » ny iray, miaraka amin’ny bala miisa telo tao Tsiarimbalala Fokontany Tsinjavona, Kaominina Fenoarivo ny miaramilan'ny ZRPS BRAVO BOA B1 Ambatofinandrahana nandritra ny fisafoana nataony ny marainan'ny 12 janoary 2020.
mardi, 14 janvier 2020 19:21
Anjahamany-Brickaville: Olona efatra nilatsaham-baratra, zazakely roa taona maty tsy tra-drano
Fianakaviana amina tokantrano iray maka aina eo an-tokontany noho ny hafanana no nilatsaham-baratra tampoka tao Tsarahizana, Kaominina Anjahamany Distrikan’i Brickaville ny alatsinainy 30 desambra 2019. Efa-mianaka izy ireo no voa ka maty tsy tra-drano ny zazakely iray vao roa taona, naratra kosa ny telo, izay vehivavy mitondra vohoka dimy volana ny iray, ary rafozambavy sy ny zanany lahy ny roa ambiny.
Mbola tsaboina ao amin’ny hopitaly be Analakininina Toamasina ilay ramatoa bevohoka noho ny hamafin’ny fahavoazany ; efa afaka nody kosa ny roa hafa rehefa avy nandalo fizahana sy nahazo fitsaboana sahaza.
Manao antso avo amin’ireo malalatanana afaka hanampy azy ilay ramatoa fa tena sahirana ara-bola ny tenany.
mardi, 14 janvier 2020 11:00
Lalàna « VBG » : Nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana
Araka ny fanapahana laharana faha-02-HCC/D3 ny 13 janoary 2020 dia nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalampanorenana sy amin’ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin’i Madagasikara ny lalàna « loi n°2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le Genre ».
mardi, 14 janvier 2020 08:37
Haintrano tao Isalo-Vohipeno: Nanolotra tafo miisa 1000 sy sakafo ny fanjakana hiatrehana ny fiarenana
Nandefa iraka tany Isalo, Distrikan’i Vohipeno, Faritra Vatovavy Fitovinany ny fanjakana, omaly, nanoloana ny fahamaizana nitranga tao amin’ity tanàna ity ny tolakandron’ny sabotsy lasa teo.
Tafo fanitso miisa 1000, kojakoja fampiasa an-dakozia isan-karazany, vary 60 kitapo, ary voamaina 30 kitapo no natolotry ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny BNGRC ho an’ ireo tra-boina, entina hiatrehana ny fiarenana.
Marihina fa trano miisa 235 no lasibatra, izay vokatry ny tsy fifehezana ny afo avy amina trano fiantsonan’ny fiara iray ka niparitaka tamin’ny tanàna. 1115 ireo tra-boina sy tsy manan-kialofana any an-toerana, saingy tsy nisy kosa ny aina nafoy.
mardi, 14 janvier 2020 08:23
Antananarivo Renivohitra: Hatao ny 16 janoary ny fametrahana samboady an’i Naina Andriantsitohaina
Hotanterahina eo amin’ny « Parvis » ny lapan’ny tanàna amin’ny alakamisy 16 janoary 2020 amin’ny 10 ora maraina, ny famindram-pahefana eo amin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny vao voafidy Naina Andriantsitohaina.
Hatao avy hatrany amin’io andro io ihany koa ny fametrahana samboady maha olom-boafidy ny Ben’ny tanàna vaovao, handraisany ny toerany sy hiantsorohany amin’ny asa aman’andraikitra voatondron’ny lalàna mifehy ny vondrombahoakam-paritra.
mardi, 14 janvier 2020 08:21
Inde: Tsy mahazo miteraka mihoatra ny 02 ny mpiasam-panjakana
Mahatratra 1.34 miliara ankehitriny ny isan'ireo Indianina, faharoa maro indrindra eran-tany aorian'ny Sinoa miisa 1.38 miliara amin'ny mponina maneran-tany eo amin'ny 8 miliara eo.
Hiakatra 1.67 miliara, raha ny tombana, ny isan'ny Indianina, izay mitombo 25 tapitrisa isan-taona, izany hoe mitovy amin'ny isan'ny Malagasy isan-taona ny fiakaran'ny isan'ny mponina ao Inde.
Tsy maharaka ny famokarana sakafo ho an'ny mponina, tsy maharaka ny trano, ny fitaterana, ny fitsaboana, ka napetraky ny fanjakana ny lalàna hamerana ny isan'ny mponina. Ka efa mihatra ny tsy fahafahan'ireo mpiasam-panjakana hiteraka mihoatra ny roa.
Ankehitriny, dia misy solombavam-bahoaka 100 mahery no te hametraka lalàna hanitarana an'io fepetra io amin'ny rehetra, mba hamerana ny zaza teraka, izay arahina fepetra ho an'ireo mbola miteraka ambon'izany, toy ny fanalana ireo fanampiana omen'ny fanjakana, fanesorana ny fiala-tsasatry ny ray niteraka, eny hatramin'ny tsy fahafahana mifidy sy fidiana intsony.